C/raxmaan Cabdi Shakuur oo shaaciyay sababta Maanta dowladda wadooyinka u xirtay - Awdinle Online
C/raxmaan Cabdi Shakuur oo shaaciyay sababta Maanta dowladda wadooyinka u xirtay
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame kana mid ah Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in sababta dowladda ay maanta wadooyinka u xirtay ay tahay inay ka hortagt xus loo dhigayo askartii lagu dilay weerarkii lagu qaaday Hooygiisa 17-kii Bishii December ee sanadkii 2017.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Facebook ayaa waxaa uu ku sheegay in sanadkii labaad ay dowladda isku dayeyso inay ka hortagto xuska 17 December, waxaana uu dowladda ugu baaqay inay Shacabka wadooyinka u furto.
Hoos Ka Akhriso qoraalka C/raxmaan Cabdi Shakuur
Waa sanadkii labaad oo shacabka Muqdisho wadooyinka laga xiro, iyadoo laga hortegayo xuska 17 December. Waxaa ciidan lagu dhigay goob kasta oo lagu tuhmayo in xuska lagu qabanayo, wada kastana waa la xiray. Madaxweyne Farmaajo isaga ayaa amray xasuuqa, islamarkaana diidan xusuusta baroordiiqa. Xusku wuu dhacayaa ee Madaxweyne shacabka wadooyinka u fur.
Previous articleSarkaal lala xiriinayo Al Shabaab oo la maxkamadeynayo
Next articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulamo xasaasi ah ka bilaabay Cabudwaaq